It is me. Ko Niknayman.: စိတ်သောကဖိစီးနေပြီ ဖြစ်သော ဗိုလ်ချူပ်မိုက်ကြီး သန်းရွှေ။
စိတ်သောကဖိစီးနေပြီ ဖြစ်သော ဗိုလ်ချူပ်မိုက်ကြီး သန်းရွှေ။
ဒီဇင်ဘာ (၁၄) ရက်နေ့ က မန္တလေးတိုင်း ပြင်ဦးလွင်မြို့ နယ် ရတနာပုံမြို့ သစ်ရှိ ရတနာပုံတယ်လီပို့ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာလာတက်တဲ့ နအဖခေါင်းဆောင် သန်းရွှေတစ်ယောက် ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်နေလည်းဆိုတာ အနီးကပ်ကြည့်ရင် မျက်နှာက အတော့်ကို ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ပုံနဲ့လဒမှိုင်ကြီး မှိုင်နေသလိုဖြစ်နေတာတွေ့ ရပါတယ်။
စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာ ဘာသာသာသနာကို စော်ကားပြစ်မှားခဲ့ပြီး၊ ဘုရားဆင်းတုတော်တွေ ကျိုးပျက်၊ ရဟန်းသံဃာတော်တွေ သွေးမြေကျ၊ ပြည်သူတွေ ဘ၀ပျက်စေလောက်အောင် မိုက်မိုက်ရိုင်းရျိုင်း ကျူးလွန်ပြုလုပ်ခဲ့မိလို့အခုဆို ချက်ချင်းဘဲ ပြန်ခံနေရတဲ့ဟန် ဖြစ်နေပါတယ်။ စိတ်သောကဖိစီးမှုကြောင့် အတော့်ကို ချူချာနေပြီး၊ ခန္ဓာကိုယ်က ပိန်ကျကာ စားထားဝါးထားသမျှ ပြနေတဲ့ ဗိုက်ကလေးတစ်လုံးဘဲ ကျန်တော့ပါတယ်။
မတော်တစ်ဆ ခေါက်ကနည်းခွေကနည်းလဲကျသွားရင် ဆေးရုံမရောက်ခင် အသက်မမှီမှာစိုးလို့အရေးပေါ်စောင့်ရှောက်လို့ ရအောင် တစ်ယောက်ကနေ သွားလေရာမှာ အရင်ကတစ်ခါမှ မပါဘူးတဲ့ အိတ်တစ်လုံးနဲ့ဘေးကနေ လိုက်ပေးနေရတယ်လို့အများကပြောနေကြပါတယ်။
ပြောရလို့ ရှိရင် ၀ဋ်မှာအမြဲ ငရဲမှာအပဆိုတာလို သံဃာတော်တွေနဲ့ပြည်သူတွေအသက်ကို ရက်ရက်စက်စက်သတ်ထားတဲ့အတွက် မကြာခင်မှာဘဲ ဒီဘ၀မှာတင် ၀ဋ်လည်ကြဦးမှာပါ။
Posted by Ko Niknayman at 5:46 PM